Horjoogayaasha Dalxiiska ee Nolosha ah ayaa loo Aqoonsaday Waxtarka ay u leeyihiin Warshadaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Horjoogayaasha Dalxiiska ee Nolosha ah ayaa loo Aqoonsaday Waxtarka ay u leeyihiin Warshadaha
Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Hormuudka dalxiiska ee Seychelles
Seychelles waxay bilawday waxqabadkeedii Bandhigga Dalxiiska ee 2021 munaasabadda Maalinta Dalxiiska Adduunka ee Sebtember 27 -keedii iyada oo loo aqoonsaday hormuudka 10 kaalintii ay ka geysteen warshadaha dalxiiska maxalliga xaflad gaaban oo lagu qabtay Akadeemiyada Dalxiiska ee Seychelles (STA) ee La Misère.
Wasiirka dalxiiska Sylvestre Radegonde ayaa soo bandhigay magacyada xafladda lagu qabtay Pioneer Park.
Sharaf ayaa la siiyay dhammaan kuwa kaalin weyn ka qaatay warshadaha dalxiiska ee Seychelles, iyagoo u fiirsaday daqiiqad aamusnaan ah kuwa aan halkan joogin.
Wasiirku wuxuu ku nuuxnuuxsaday in hormuudka la sharfayo ay tahay inuu tusaale u noqdo dhallinyarada.
Shakhsiyaadka la aqoonsaday sanadkan waa Marwo Doris Calais, Marwo Mary iyo Mr. Albert Geers, Ms. Gemma Jessie, Marwo Jeanne Legge, Mr. Lars-Eric Linblad, Mrs. Kathleen iyo Mr. Michael Mason, Mr. Joseph Monchouguy , Mr. Marcel Moulinie, Marwo Jenny Pomeroy, iyo Mr. Guy iyo Marwo Marie-France Savy.
Daahfurka magacyada ku xardhan sabuuradaha lagu dhejiyay Dalxiiska Seychelles Beerta Pioneer Park oo ku taal irridda Akadeemiyadda, Wasiirka Dalxiiska Sylvestre Radegonde, oo ay xafladda ku soo biireen maamuuslayaasha ama wakiiladooda, ayaa sheegay in markii ugu horreysay shaqsiyaadka dalxiiska ee weli nool loo dabbaaldegayo, marka lagu daro kuwa yaa naga tagay.
“Tani waa markii ugu horreysay oo aan aqoonsanno dadka weli nool. Waxaan aaminsanahay inaan u baahanahay inaan dadka siino aqoonsiga inta ay nool yihiin. Waxaa wanaagsan inay ogaadaan in waxqabadkooda la mahadiyo, ”ayuu yiri wasiirku.
Wasiirka dalxiiska Sylvestre Radegonde
Furitaankii khudbaddiisa, wasiirku wuxuu bogaadiyay dhammaan kuwa kaalin weyn ka qaatay warshadaha dalxiiska ee Seychelles, isagoo u fiirsaday daqiiqad aamusnaan ah kuwa aan hadda nala joogin.
“Dhacdadu waa fursad lagu xusuusto laguna maamuuso aasaasayaashii dhulka Warshadaha Dalxiiska ee Seychelles. Qof kasta oo ka mid ah warshadaha ayaa kaalin muhiim ah ka qaata. Waan ku faraxsanahay in aan maanta halkaan joogno oo aan xusuusanno dhammaan kuwii sida adag uga shaqeeyay in warshadu ay noqoto halka ay maanta joogto. Waxaan xushmeyneynaa 10 horjooge laakiin intaas waa in badan oo la raaco. Kuwii halkan joogay, waxaa jiray xamaasad badan oo ku saabsan waxaad u samaysay warshadaha waana ku mahadsannahay taas, ”ayuu yiri Wasiir Radegonde.
Wasiirka oo ka faa’ideysanaya goobta xafladda lagu qabtay oo ah halka laga dhisayo mustaqbalka soo -dhoweynta ummadda iyo xirfadleyda dalxiiska, ayaa wasiirku ku nuuxnuuxsaday in hormuudka la sharfayo ay tahay inuu tusaale u noqdo dhallinyarada, isagoo xusuusiyay in ka shaqaynta warshadaha dalxiiska ay adag tahay, laakiin taas oo leh ballanqaad iyo hawl karnimo waxba ma suurtowdo. "Dadka aan aqoonsanno maanta waxay ku jireen warshadaha sanado badan, dadka yaqaanna way arkeen sida ay ku bilaabeen - runtii aad bay u yar yihiin, iyo sida ay u galeen shaqo adag waxay ku guuleysteen inay gaaraan halka ay maanta joogaan."
Dalxiisku waa shaqsi kasta oo naga mid ah, ayuu yiri wasiirku, isagoo iftiimiyay baahida loo qabo in qof walba uu ka wada shaqeeyo sidii sare loogu qaadi lahaa heerarka adeegga meelaha loo socdo. Isagoo cambaareynaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee xatooyada iyo falalka ka dhanka ah dalxiisayaasha wuxuu ka codsaday guud ahaan shacabka inay ka feejignaadaan falalkooda maadaama ay saameyneyso muuqaalka dalka.
2021 ayaa noqonaysa sannadkii lixaad tan iyo markii la aqoonsaday hormuudka Dalxiiska, hindise uu bilaabay wasiirkii hore ee dalxiiska, Mr. Alain St Ange. Ka qeybgalka munaasabadda STA waxaa ka mid ahaa Wasiirka Dawladaha Hoose & Arrimaha Bulshada Marwo Rose-Marie Hoareau, wasiirradii hore ee mas'uulka ka ahaa Dalxiiska Mr. Alain St. Ange iyo Marwo Simone Marie-Anne de Comarmond, Xoghayaha Guud ee Dalxiiska Sherin Francis iyo Agaasimaha Akadeemiyada Dalxiiska ee Seychelles Mr. Terrence Max.